China Igwe eletriki ụgbọ ala eletriki: 15G njikwa, 80km kilomita, max na-ebu 300kg, ụlọ ọrụ taya na ndị nrụpụta | GUODA
Ngwongwo eletriki eletrik: Onye na-achịkwa 15G, kilomita 80km, na-ebu 300kg, taya taya
Site na batrị 60V58Ah na igwe elekere 10 nke anụ ọhịa 1400W, anyị Ace Na-ebu Ibu ebu nwere ike ijere gị njem kilomita 80 na ihe ruru kilogram 300 na-ebu ya, yana 300-10 Vaccum taya na ọrụ. Anyị na-eji onye njikwa 15G eme ihe iji kwe nkwa ọmarịcha ịnya ụgbọ ịnyịnya gị. Ejikwa ịnyịnya ígwè na-aga n'ihu na azụ diski breeki na akara atọ + na-agbanwe. N'oge njem ahụ, ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ịmụta data dị mkpa site na mita LED na igwe kwụ otu ebe n'oge ọ bụla.
Ihu breeki n'ihu / N'azụ
300-10 agụụ agụụ
Ibu ibu ikike
Nke gara aga: GD-KB-B003: (Nwa) ụmụaka na-emezi igwe kwụ otu ebe, ụmụaka igwe kwụ otu ebe, Toybox, igwe kwụ ọtọ ụmụaka
Osote: Factory N'ihi China Ruo Mgbe Ebighị Ebi Igba ígwè Mountain Bike Road Bike maka na-eto eto Igwe kwụ otu ebe Shock Absorption Agbanwe Speed ​​Mountain Bike 21-30 Speed
Igwe igwe eletriki eletriki, a na-akpọkwa ịnyịnya ígwè eletrik, bụ SUV nke ụwa igwe ebe ha bụ ụdị igwe kwụ otu ebe dabara adaba nke igwe eletriki igwe eletrik nke ọma. Eletrik na-abawanye ụgwọ ọrụ na ọtụtụ igwe kwụ otu ebe nke na-enyere aka iburu ibu dị arọ maka ogologo oge. Karịsịa n’obodo mepere emepe, ibu eletriki na-enye ndị na-anya igwe eletriki ikike ibu nnukwu ngwongwo, ndị na-agba ebu ibu ga-agaru ebe dị anya n’ụzọ ọsọ ọsọ ma na-adigide.
A na-ejikarị ụgbọ ịnyịnya eletrik arụ ọrụ na ntọala dịgasị iche iche, dịka ọmụmaatụ, nnyefe na obodo ndị mepere emepe, nri nri na mpaghara okporo ụzọ dị elu, na-emegharị mkpokọta gburugburu nnukwu nrụnye na njem ụlọ ahịa. Nkà na ụzụ na-eme ka ọnọdụ ndị na-agba ịnyịnya dịkwuo mma, ịdị mfe siri ike na ngwa ngwa ngwa ngwa iji nweta ụgwọ dị ala na mgbakwunye na mgbakwunye na arụmọrụ obere, na-eme ka ụgbọ ịnyịnya ibu na-aba uru maka ogologo ụzọ ma ọ bụ maka mbara ala dị iche iche.
O doro anya na, igwe eletriki igwe eletrik adịghị ọnụ ala ma e jiri ya tụnyere gwongworo n'akụkụ niile. Ha anaghị eme mkpọtụ. Ha na-echekwa ume na-enweghị nnukwu ọnụ mmiri na-akpọ nkụ mgbe niile. Ha na-agbanwe agbanwe n'okporo ụzọ, ọkachasị mgbe ịrapara n'okporo ụzọ. Nke ka mkpa bụ na ha dịkarịghị ize ndụ karịa ọtụtụ ụgbọ ala ndị ọzọ
Eletriki ibu Bike
abụba taya eletriki ebu ibu igwe kwụ otu ebe
eji igwe kwụ otu ebe
Steel ibu bike
ígwè eletriki ebu ígwè